Wasaaradda Cadaaladda Puntland Oo Ku QabatayXarunta Wasaaradda ShirkiiBillaha Ahaa Ee DaneeyayaashaCadaaladda – Wasaaradda cadaaladda Puntland
Wasaaradda Cadaaladda Puntland iyadaoo ka duulaysa tayaynta Cadaaladda Puntland ayaa waxa ay markii sadexaad qabatay shirarkii bilaha ahaa ee ay isugu imaanayeen hay’adaha ka shaqeeya cadaaladda.
Kulanka ayaa waxaa shirkiisii sedexaad goob jog ka ahaa Wasaaradda Cadaaladda, Maxkamadda Sare, Maxkamadda Ciidanka, Xafiiska Xeer ilalainta, Hay’adaha UNFPA, PSU LEGAL AID, , EUCAP, CUSTODIAL CORPS,UNICEF, SAVE THE CHILDREN ,WORLD-VISION, KAALO,UNHRC, NCA, UN WOMEN, UNODC ,UNFPA,IDLO.
Ajandaha kulnka ayaa ahaa in lagu kal warqaato oo dhammaan Hay’adaha Cadaaladda ka shaqeeya ay kulanka la wadaagaan shqooyinkii uqabsoomay kadib shirkii hore, sidoo kale waxaa kulanka lagu falanqeeyay meesha ay marayaan go’aamadii kasoo baxay shirkii hore.
Ugu dambayntii waxaa ka soo baxay kulanka qodobo ay ka mid ahaayeen kuwaan soo socda
In gudiga loo xilsaaray maxaabiista xukun sugayaasha ah ay kulankaan kan xiga keenaan warbixin dhamaystiran oo kusaabsan xaaladda ay ku sugan yihiin maxaabiista kujira xabsiyada Puntland ee xukun sugayaasha ah.
In kulan ay yeesshaan gudiga loo xilsaaray tababaridda bahda Cadaaldda si ay u qaabeeyaan qaabka iyo nooca uu noqonayo tababarku.
In shirkaan kan xiga lagu casumo wasaaradaha Caafimaadka, Hawaynka, Waxbarashada iyo Xafiiska Difaacaha xuquuqda Aadanaha Puntland.
In guddi loo saaro kasoo tala bixiya sidii wax looga qaban lahaa xal uhelidda dhibaatooyinka kasoo wajaha dadka masaakiinta ah ee aan awoodin in ay baxshaan qoondooyinka ay qaadaan Maxakamaduhu marka dacwadd la xaraysanayo.
In gudi loo saaro kasoo tala bixiya suurtagalnimada in la sameeyo cilmi baaris kusaabsan kufsiga, kulanka xigana ay la wadagaan warbixin dhamaystiran oo arintaas kusaabsan dhamaan xubnaha kulnaka.
Wasaaradda Cadaaladdu in ay sii wado u qareemidda maxaabiista ku eedaysan burcad badeednimada ee laga soo wareejiyay xabsiyada dibadda, si ay u helaan cadaaladd
Dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka waxa ay iskuraaceen in la joogteeyo shirarka noocaan ah, waxa ayna balan qaadeen in ay kasoo qayb gali doonaan shirkaan kan xiga, sidoo kale waxa ay balan qaaden in qofkasta shaqada loo xilsaaray uu sida ugu wanaagsan u guto.
Ugudambayntii waxaashirka sooxiray wasiir kuxigaynka wasaaradda cadaaladda puntland DR. Maxamed Cali faarax isaga oo uga mahadceliyay kasoo qaybgalayaasha shaqooyinka muhiimka ah ee ay uhayaan bulshada reepuntland kulana dardaarmay in ay sii joogteeyaan shaqadaas iyaga oo dardargalinaya